IHhovisi likaMengameli lithi ‘siphoxile’ isinqumo senkantolo ngolwama-spy tapes – LIVE Express
IHhovisi likaMengameli selibhodlile kulandela isinqumo se-Supreme Court of Appeal ngoLwesihlanu ekuseni njengoba ichithe isicelo sikaMengameli Jacob Zuma kanye ne-National Prosecuting Authority (NPA) sokudlulisa isinqumo seNkantolo eNkulu neyanquma ukuthi sibuyiselwe eceleni isinqumo sokuhoxiswa kwamacala angu-783 enkohlakalo ayebhekene noZuma.
UZuma kanye ne-NPA bafaka isicelo kule nkantolo sokudlulisa isinqumo se-North Gauteng High Court mayelana namacala enkohlakalo ayebhekene noMengameli Zuma.
Ngo-June 2016 i-North Gauteng High Court yachitha isicelo esasifakwe ngabameli baZuma kanye ne-NPA sokunikezwa igunya lokudlulisa isinqumo esathathwa yiyo le nkantolo ngenkathi inquma ukuthi kumele sibuyiselwe eceleni futhi sibuyekezwe isinqumo sokuhoxisa amacala enkohlakalo nokukhwabanisa ayebhekene noZuma.
FUNDA NALOLU DABA: UZuma akayogeza igama lakhe enkantolo uma emsulwa – Maimane
“Isinqumo se-Supreme Court of Appeal namhlanje, yize siphoxile, besilindeleke kakhulu,” kusho iHhovisi likaMengameli esitatimendeni.
Leli hhovisi lithi lesi sinqumo senkantolo sisho ukuthi sekusemahlombe e-NPA ukuthi ithathe isinqumo sokuthi iyamshushisa yini uZuma.